Hoopa City 2 bụ egwuregwu ụlọ obodo maka ụmụaka | Gam akporosis
Hoopa City 2 bụ «Sim City» edebere maka ụmụaka nọ n'ụlọ
Hoopa City 2 bụ egwuregwu gam akporo ọhụụ maka ndị niile na-ege ntị na nke ahụ na-ewe mfe nke echiche nke Sim City na ekwentị. Wuo ụdị ụlọ dị iche iche, tinye ụmụ amaala ọhụụ na ha ma mee ka obere obodo bụrụ obodo iji ruo obodo.
Naanị ihe na-eme Enweghị ụdị nkuzi ọ bụla na - akuziri anyị igwu egwu; Nghọta na anyị nwere ike isi na Hoopa City mbụ pụta, mana maka ndị batara ọhụụ ọhụrụ a Dr. Panda, ọ nwere ike iwepụta oge iji nweta ya. Ka anyi jiri obodo a ma obu ulo eji eme ihe.
1 Mee obodo nro
2 Wulite ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọ elu na ndị ọzọ na Hoopa City 2
3 Obodo Hoopa buru ibu karị
Mee obodo nro
Na ụmụ anụmanụ dị ka ụmụ amaala, Hoopa City 2 bụ egwuregwu na-adọrọ mmasị ma dịkwa egwu nke sitere na oge mbụ e debere anyị n’ihu ụlọ na anyị ga-emeziwanye ka anyị pịa bọtịnụ ụlọ dịka akara ngosi «obi».
N'ezie, ọ bụ egwuregwu dị mma maka ụmụaka, mana Egwuregwu ọ bụla nwere ike ịkpọ, ebe ọ bụ na n’ime sekọnd ole na ole anyị nwere ike wuo obodo nke anụmanụ ndị a bi na ya nke anyị nwere ike iru ogige, ụzọ, ọdụ ndị uwe ojii na ọtụtụ ụlọ agbachi agbachi ka anyị na-aga n’ihu.
La eziokwu na ahụmịhe ahụ dị mfe ma ọ dịghị nkuzi, mana ị ga-anwale otu esi etinye ụlọ ndị ahụ iji ghọta usoro egwuregwu. Anyị nwere bọtịnụ ahụ iji wulite na ọ bụrụ na anyị edebe ya, anyị nwere ike melite ụlọ ndị e kere eke.
Wulite ụlọ ahịa, ọdụ ụgbọ elu na ndị ọzọ na Hoopa City 2
Yabụ anyị ga-aghọta n'onwe anyị anyị ga-ewu obodo anyị rọrọ, ọ bụ ezie na n'adịghị ka Sim City ma ọ bụ otu Pocket City nke anyị nwere na gam akporo, anyị anaghị enweta ụdị ọnụ ọgụgụ ọ bụla ma ọ bụ data na-agwa anyị ma anyị na-eme ya n'ụzọ ziri ezi ma ọ bụ na-ezighị ezi.
Ee ọ bụ eziokwu na ndị ahụ ndị na-akpa ọchị na ọchị na-egosi ọnọdụ ha na sandwichesMa ọ ga-abụ anuri, nwute na mmadụ ole na ole ndị ọzọ, mana ihe niile ga-esi n’aka anyị gbalịa imezi agbata obi ma si otú ahụ mee ka ha nwee obi ụtọ.
Hoopa City 2 dịkwa na-anwale njikọ dị iche iche nke ụlọ iji meghee ndị ọzọ, n'ihi na ọ na-elekwasị anya na imeziwanye obodo nke anyị na-eji nnwere onwe ime nhọrọ eme ihe na-enweghị oke njedebe ha nyere anyị.
Obodo Hoopa buru ibu karị
N'ezie, Hoopa City 2 A raara ya nye ulo kacha nta nke mere na ha nwere n'aka ha ohere nke iwu ụlọ na-enweghị oke na nke, site na ngwaọrụ ndị anyị nwere na okpuru ala, ịnwere ike ịhapụ ụdị ụlọ ọhụrụ ị nwere ike iwepụta.
Na anya ọ bụ egwuregwu mara mma nke ọma ma jikwa ya n'ụzọ zuru oke, ọbụna inwe ọtụtụ ihe na ihuenyo dị ka ụmụ amaala ahụ. Ezi agwa imewe na nile di iche iche nke mara mma ụmụ anụmanụ, na kpam kpam ọ bụ a karịa zuru okè egwuregwu. Ee, anyi n’enweghi ihe efu nke ihe nkuzi n’akuziri ihe banyere egwuregwu a.
Hoopa City 2 dị kpamkpam na enweghị mgbasa ozi na-enweghị micropayments na Storelọ Ahịa Play. Egwuregwu maka ụmụntakịrị nọ n'ụlọ, mana nke ahụ nwere ike igwu onye ọ bụla n'ihi na ọ dị mfe iji wuo na-enweghị oke oge na ihe ọ bụla maka ihe anyị ji eme egwuregwu ndị ọzọ.
Iwughi obodo, obodo nta ma obu obodo dum n’enweghi oke.
Raara nye ndị niile na-ege ntị
Ihe odide ya mara mma
Anya na ọ mara mma nke ukwuu
Ọ nwere ike inwe ọgba aghara
Hoopa Obodo 2
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Hoopa City 2 bụ «Sim City» edebere maka ụmụaka nọ n'ụlọ
Egwuregwu 9 kachasị mma na egwuregwu ọhụrụ n'izu a na gam akporo
Yabụ ị nwere ike ịme ihe ngosi ngwa ngwa na ekwentị gị na ngwa a